Sound Devices '633 သည်အီတလီရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲအတွက်မြိန်မြံသောအသံများကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီး Melaverde | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အီတလီရုပ်မြင်သံကြားပြရန်, Melaverde များအတွက်အသံဖုန်းများအတွက် '' 633 Capture Savory အသံ
သည်အီတလီနိုင်ငံမီလန်, ဇန်နဝါရီ 27, 2016 - 15 ၏အသက်အရွယ်ကနေ Matia ထူးဆန်းတဲ့အသံသည်များအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ပြဌာန်းခွင့်သူ၏ဇာတိအီတလီမှာတစ်ဦးစန်းအော်ပရေတာအဖြစ်အစောပိုင်းအလုပ်ခဲ့သည်။ မိမိအခက်ခဲအလုပ်နှင့်ယာဉ်သင်ယူဖို့အလိုဆန္ဒမှတဆင့်ထူးဆန်းတဲ့အမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများအပေါ်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းနောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းများနှင့်တာဝန်များထွက်ရှာတော့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်က, ထူးဆန်းတဲ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုသူအသံကြီးကြပ်ရေးမှူးအပေါ်အမည်ရှိအဖြစ်ပယ် paid Melaverdeအီတလီနိုင်ငံအတွက်လူကြိုက်များ Channel ကို5အပေါ်အများဆုံးကြည့်ရှုအစီအစဉ်များကိုတဦး။
Giacomo Tiraboschi ကဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်, Melaverde တိုင်းတနင်္ဂနွေကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် Ellen Hidding နှင့် Edoardo Raspelli နှင့်အတူထုတ်လွှင့။ တစ်ခုချင်းစီပြသရတနာပြည်တွင်းနှင့်ဒေသတွင်းအီတလီဟင်းလျာများမှမြင့်တက်ပေးသောရှေးဟောင်းအရသာ, ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်အချက်အပြုတ်အစဉ်အလာများကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်ထွက်သတ်မှတ်။ တပါးရဲ့အစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်းသုံးစက်ကိရိယာများထားရှိခြင်းနှင့်သောအပြောင်းအရွေ့ပေါ်အဆက်မပြတ်တစ်ပြပွဲအမျိုးမျိုးအသံဖမ်းအခြေအနေများကိုဆီးတားဘူးအရေးပါသည်။
ထူးဆန်းတဲ့ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့သည် အသံဖုန်းများအတွက် အသံအင်ဂျင်နီယာချုပ်ဒံယလေကအက်စ် McCoy, CAS, ToneMesa, Inc, တစ်ဦး၏ပိုင်ရှင်နှင့်အော်ပရေတာများက Los Angeles မြို့-based တည်နေရာနဲ့ Post-ထုတ်လုပ်မှုအသံကုမ္ပဏီ။ "ငါသည်သူ Lucca အတွက်ရိုက်ကူးသောအခါအီတလီမှာတွေ့ဆုံမည်နဲ့ Daniel နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရန်လုံလောက်သောကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူကသုံးပြီးခဲ့သည် အသံဖုန်းများအတွက်'' 664 ။ ငါကအကြောင်းသူ့ကိုမေးတဲ့အခါသူကထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်သို့ငါနှင့်အတူထိုင်ဖို့ပျော်ရွှင်ထက်ပိုမိုခဲ့ပါတယ်။ ငါ 664 ဝယ်ယူရန်အပေါ် သွား. နောက်ပိုင်းမှာငါ့အတူးစင်တစ်ခု 633 ကဆက်ပြောသည်။ ယခုတွင်ငါသည်တစ်ဦးယုံကြည်သူဖြစ်ကြောင်းကို အသံဖုန်းများအတွက်။ "
ကဲ့သို့သောပြပွဲအပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည့်အခါအဆိုပါ 633 ရဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစား, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အင်္ဂါရပ်များကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်ကပြီးပြည့်စုံသောရှေးခယျြမှုလုပ် Melaverde, အရာအမျိုးမျိုးသောရာသီဥတုနှင့်ရှုခင်းများအတွက်စံချိန်ထူးဆန်းလိုအပ်သည်။
ငါတို့သည် ထောက်. , ဘယ်နေရာမှာအလယ်၌အင်တာဗျူးတွေလုပ်နေရှာတွေ့ပြပွဲအပေါ်အကြိမ် "တစ်ဦးကအများကြီး။ ယင်းနှင့်အတူကျနော်တို့ "ထူးဆန်းတဲ့ပြောပါတယ်" ကို frozen အဲလ်ပ်တောင်တန်း၏အလယ်သို့ရဟတ်ယာဉ်တက်တာတစ်ခုသို့မဟုတ်ပူပြီးခြောက်သွေ့ခရမ်းချဉ်သီးလယ်တောင်ပိုင်းအီတလီကိုဦးတည်, ငါသည် 633 အမြဲငါကမျှော်လင့်ထားအတိအကျဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုသိနိုင်မည် 633 ငါလွယ်လွယ်ကူကူတယောက်ကိုတယောက်အခွအေနေကနေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။ တဆယ်စက္ကန့်အတွင်း, ဒါမှမဟုတ်ဖိုင်များကိုသို့သွား, တဦးတည်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကို select, ငါးစက္ကန့်အတွင်းတိပ်နံပါတ်, တညျ့ - ပုဒ်, ရောနှော, မှတ်တမ်းတင်ခြင်း, မိုက်ခရိုဖုန်းကနေ - ငါအရာအားလုံးကို၏ setting ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ငါမဆိုအခြားကိရိယာနဲ့မပွုနိုငျနှင့်တကယ့်ကိုအတော်လေးထူးခြားပြောင်မြောက်ပါတယ်။
"၏ဆောက်လုပ်ရေး အသံဖုန်းများအတွက်'' 6-စီးရီးအသံဖမျးအံ့သြဖွယ်ပါပဲ "ဟုထူးဆန်းကထပ်ပြောသည်။ "ဟုအဆိုပါ 633 အပေါ် fader အစဉ်အမြဲငါကိုအသုံးပြုခဲ့ကြအရှိဆုံးအဆင်ပြေ fader ဖြစ်ပါတယ်။ သင်လည်းလန်းစပြုပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်သာလေးပုဒ်စီမံခန့်ခွဲရန်တဦးတည်းလက်ရှိသည့်အခါအမှန်တကယ်အသုံးဝင်သောအရာတစျခုကိုလက်ညှိုးနှင့်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့အခြားတစ်ဖက်အတွက်အလုံးအရင်းနဲ့ရှိနေချိန်မှာဒါဟာငါ့ကိုရောထွေးနှင့်တဦးတည်းလက်နှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ငါကို အသုံးပြု. အပေါ်စီစဉ် အသံဖုန်းများအတွက် လာနှစ်ပေါင်းများစွာ။ "
အသံဖုန်းများအတွက် တီဗီနည်းပညာ 2016-01-27
ယခင်: Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ (PWS) ကိုခန့်အပ်ဝီလျံ O'keefe ကုန်ထုတ်လုပ်မှု Manager ကို
နောက်တစ်ခု: VidTrans16 မှာ DigiLink မီဒီယာပို့ဆောင်ရေး Solutions ခင်းကျင်းပြပေးပါရန် Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ